Vaovao - UUGreenPower dia namoaka vahaolana efatra famahanana mavesatra
UUGreenPower dia mamoaka vahaolana efatra fanefana enti-miasa
UUGreenPower dia namoaka vahaolana efatra fanonerana!
Torohevitra lehibe: ny 26 Aogositra, natao tao Shanghai New International Expo Center ny fampirantiana indostrialy fampirantiana faha-14 an'ny Shanghai International. Amin'ity fampirantiana ity dia orinasa marobe misy kintana eto an-toerana sy avy any ivelany ahitana ny vahaolana famahan-tsaina manan-tsaina, vahaolana amin'ny fotodrafitrasa mandroso, haitao fijanonan'ny fiara, fiara fitaterana herinaratra, photovoltaic, rafitra fitehirizana angovo, sns.
Mba hamahana ny krizy angovo misongadina sy mihombo hatrany eo amin'ny tontolo iainana dia nisy fiovana lehibe teo amin'ny indostrian'ny fiara manerantany. Ny fiara mandeha amin'ny angovo vaovao dia nanjary tetikady fampandrosoana lehibe an'ny firenena isan-karazany, ary hampiroborobo hatrany ny rafitry ny fikarohana sy ny fampandrosoana teknolojia ary ny fizotran'ny indostrialy. Tamin'ny volana desambra 2018, ny komisiona ho an'ny fampandrosoana sy ny fanavaozana nasionaly, ny fitantanan-draharahan'ny angovo nasionaly, ny minisiteran'ny indostria ary ny teknolojia fampahalalana ary ny minisiteran'ny vola dia niara-namoaka ny "fampandrenesana momba ny drafitra hetsika hanatsarana ny fahafaha-manohana mibaiko ny fiara vaovao", izay mazava fa takiana ny "fanafainganana ny fikarohana sy ny fampiharana ny teknolojia famahanana herinaratra mahery vaika", "famolavolana fenitra ara-teknika ho an'ny famerana herinaratra amin'ny bus be herinaratra, ary fanatanterahana fikarohana sy fampandrosoana teknolojia famahanana herinaratra ho an'ny fiara mpandeha sy Fikarohana momba ny fampandrenesana mialoha. miasa ". Tamin'ny volana jolay 2020, ny State Grid Corporation of China, miaraka amin'i China Power Grid Corporation, chademo protocol Association of Japan and Tokyo Electric Power Co., Ltd., dia namoaka ny taratasy fotsy momba ny teknolojia famahana conduction Chaoji an'ny fiara elektrika, izay manamarika ihany koa ny taranaka vaovao amin'ny teknolojia famandrihana mandroso mankany amin'ny dingana vaovao amin'ny famolavolana fenitra sy ny fampiharana indostrialy, ary ny famoahana herinaratra avo lenta dia eken'ny maro amin'ireo mpanao indostria.
Mahagaga fa amin'ity fampirantiana ity, ny Shenzhen UUGreenPower Electric Co., Ltd. (izay antsoina ankehitriny hoe UUGreenPower), ny mpitarika ny famandrihana sy famoahana vahaolana mahira-tsaina EV, dia nitondra ny lohalaharana amin'ny fanavaozana ara-teknolojia, ary nandefa vahaolana efatra tena enti-miasa. , ary koa ny vongan-tsolika UBC 75010 bidirectional V2G, izay afaka mamaly ny firafitry ny V2G amin'ny ho avy, manangana onjam-tampon'ny fara tampony.
Araka ny filazan'i Sina ny tambajotran'ny antontam-bato, ny UUGreenPower dia nandefa andian-dahatsoratra maodely maromaro miaraka amina ekipa R & D matanjaka sy taona niangona tamin'ny haitao teo amin'ny sehatry ny fiovan'ny angovo, ary nitana ny toerany voalohany amin'ny haitao amin'ny indostria ho an'ny fotoana ela. Tamin'ny fampirantiana farany, ny modely famerenam-bidy avo lenta IP65, izay natomboka voalohany tao amin'ny indostria tamin'ny alàlan'ny fanavaozana tsy miankina, dia nanindrona tifitra teo amin'ny sandriny ho amin'ny làlan'ny fampandrosoana azo itokisana sy manana fahazoana avo lenta ho an'ny indostrian'ny famandrihana.
Tamin'ny fampirantiana tamin'ity taona ity, ny vokatra vaovao marolafy natolotry ny UUGreenPower dia nahasarika olona maro avy amin'ny indostria hijery sy haino aman-jery indostria hifaninana amin'ny fandrakofana. Nanadihady manokana an'i Bo Jianguo, mpitantana jeneralin'ny UUGreenPower, izay nanolotra am-paharetana ireo vokatra vaovao ho antsika koa i Sina izay nametraka tambajotra antontany.
Vahaolana efatra famerenam-bola
40kW vahaolana mahery famahanana haingana
Araka ny lazain'i Bai Jianguo, mpitantana jeneralin'ny UUGreenPower, UUGreenPower dia manohy ny toerany eo amin'ny sehatry ny haitao famahanana herinaratra. Miaraka amin'ny haitao farany matanjaka sy ny haitao fanaparitahana hafanana, ny modely famerenam-pahefana mahery 40kW dia mitazona ny habeny sy ny interface miaraka amin'ilay modely 30kW. Amin'ny famolavolana ny antontam-bato rehetra, ny habaka sy ny vidin'ny antontam-bato rehetra dia voatahiry. Ny habetsaky ny herin'ny antontam-bato rehetra dia nitombo 30%, ary ny vidin'ny singa isaky ny watt dia nihena 10%.
Ny mpamatsy voalohany eo amin'ny sehatry ny indostria mba hampiroborobo ny habe mitovy, ny hery avo lenta an'ny modely famenoana 40kW, ny hakitroky ny heriny hatramin'ny 60W / in3, mitarika ny refin'ny indostria.
Topoloza Viagra PFC telo ambaratonga, topolojia mifanindran-dàlana mifangaro mifangaro efatra, teknolojia fampifangaroana magnetika, algorithm fifehezana dizitaly marina, fisainana endrika tsara indrindra
Ampifanaraho amin'ny làlam-pandrosoana misy herinaratra avo lenta sy famahanana haingana amin'ny indostria
Ny habetsaky ny herin'ny antontam-bato rehetra dia nitombo 30%, ary ny vidin'ny vidin'ny singa isaky ny watt dia nihena 10%
Vahaolana fiarovana haingana IP65 fiarovana avo
Ny singa fototra amin'ny antontam-bato dia ny maody mavesatra. Ny fahamendrehana sy ny fahamarinan-toerana amin'ny asany dia lakilen'ny fahatokisana ny rafitry ny teboka famerana. Miaraka amin'ny fitomboana haingana amin'ny isan'ny pilotra famandrihana napetraka ao Shina, hita taratra tsikelikely ny tsy fitovian'ny fahombiazan'ny fiasa tena izy. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny tahan'ny tsy fahombiazan'ny maodely famerana dia olana lehibe eo amin'ny fisian'ny rafi-pitenenana.
Raha ny fanadihadiana nataon'ny manam-pahaizana momba ny indostria, ny fametrahana pilotra dia apetraka eny ivelany amin'ny tontolo feno vovoka, avo-hafanana ary orana. Na dia IP54 amin'ny ankapobeny aza ny naoty fiarovana ny antontam-pilotra, ny maodelin'ny famoahana modely amin'ny ankapobeny dia IP20 amin'ny alàlan'ny famolavolana rivotra. Ny vovoka, zavona masira, fanondrahana rano avy amin'ny ranonorana amin'ny tontolo iainana dia tsy azo ihodivirana hiditra ao amin'ilay maody, ary avy eo hisy fiantraikany amin'ny ain'ny serivisy. Noho izany, mba hamahana ifotony ity olana ity dia ho fanalahidy ny fanatsarana ny fiarovana ny tontolo iainana ny modely famandrihana.
Ao amin'ity fampirantiana ity, UUGreenPower dia nampiseho ny kinova 2.0 nohavaozina ho an'ny modely fiarovana avo lenta IP65. Aorian'ny fanamarinana ny tontolo iainana mahery noho ny herintaona mahery dia azo apetraka eny amin'ny tsena amin'ny ambaratonga lehibe ny endrika vaovao amin'ny modely. Ny maodelim-piarovana avo lenta an'ny IP65 dia mandray ny teknolojia fanaparitahana hafanana tsy miankina miaro amin'ny rivotra ary mihatsara tanteraka ny rafitra azo itokisana. Ny TCO tsingerin'ny fiainana ankapobeny amin'ny rafitry ny antontam-bato dia mety ho voatahiry manodidina ny 40000 RMB raha oharina amin'ny modely IP20 ao anatin'ny 10 taona.
Izy io dia mety amin'ny tontolo iainana matanjaka toy ny vovoka fasika, zavona ary fanondranana
Nohatsaraina ny fahamendrehana modely, maimaimpoana ny fikolokoloana mandritra ny 5 taona, ary ny vola lany amin'ny fikojakojana isan-taona dia voatahiry manodidina ny 3000 RMB / taona
Ny antontam-bato rehetra dia havaozina ho IP65 tsy misy famolavolana modely famandrihana tsy misy rano, izay mamonjy ny vidiny
Ny antontam-boninkazo dia tsy mila contactor AC, landihazo misy vovoka, mpankafy, mamonjy 3000 RMB / kabinetra
Raiso ho ohatra ny antontam-bato tokana 120kw, ny tahiry TCO 5 taona sy 10 taona dia manodidina ny 10000 RMB sy 40000 RMB tsirairay avy
30kW vahaolana malefaka haingana mamaly haingana
Bo Jianguo, tale jeneralin'ny UUGreenPower, dia nanolotra vokatra kintana iray hafa koa, modely famerenam-bidy 30kW miaraka amina famaritana marobe amin'ny scenario samihafa. Araka ny tenin'Andriamatoa Bai, ity maodely ity dia afaka mahafeno ny fepetra takiana fainganana haingana amin'ny tobin-tsolika amin'ny sehatra samihafa ary manampy ny mpanjifa hahatsapa ny teti-bola fampiharana tsara indrindra. Ohatra, 750V / 40A ho an'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka, 1000V / 30A ho an'ny fiantsonan'ny mpamily fiara miasa ary 500V / 60A ho an'ny toeram-pifanakalozana herinaratra. Ankoatr'izay, ho an'ny tontolo iainana fanondrahana sira, dia misy modely famenoana lakaoly (f) modely sy famaritana eoropeanina (b) modely ho an'ny tsena eropeana.
Mizara ny tsenan'ny modely famerenam-pahefana mahery 30kW
Misy famaritana isan-karazany. 750V / 40a, 1000V / 30A ary 500V / 60A dia mety amin'ny tranga fiampangana isan-karazany, toy ny tobin'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka, ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka ary ny toby fifanakalozana herinaratra
Famaritana feno (f) famenoana feno dia tsy voatery, mety amin'ny fampiharana ara-tontolo iainana henjana
Famaritana fenitra eoropeanina (b) tsy voatery, mety amin'ny toeram-piantsenana mahazatra an'ny eoropeanina
Safidio ny tsipiriany mifanaraka amin'izany mba hahatratrarana ny drafitra fampiharana tsara indrindra, arakaraka ny tranga samihafa
Ifanaraha-maso ntelligent ny EV mamaly vahaolana
Mandritra izany fotoana izany, mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fidirana milina iray miaraka amina basy telo takian'ilay antontam-piaramanidina eoropeanina any ivelany, dia natombok'i UUGreenPower manokana ihany koa ny modely fanaraha-maso ny antontan-tariby umev04 amin'ity fampirantiana ity. Ny singa fanaraha-maso iray dia mety mifanaraka amin'ny fenitra Eoropeana, fenitra japoney ary ny fenitra nasionaly fanaraha-maso fenitra. Raha ampitahaina amin'ny drafitra birao adaptatera mahazatra eny an-tsena, ny vidin'ny fanaraha-maso dia azo avotana manodidina ny 50%.
Natao manokana ho an'ny antontam-pamandrihana angovo vaovao, tompon'andraikitra amin'ny fifandraisana amin'ny bateria herinaratra fiara elektrika mba hahatsapany ny fibaikoana ny dingan'ny famahanana rehetra
Fanohanana mitambatra amin'ny fenitra nasionaly, fenitra eropeana ary fenitra Japoney
Tohano ny basy indroa nasionaly vaovao, basy indroa eropeana, basy indroa japoney, fifanakalozana basy roa
Tohano ny milina iray miaraka amina basy telo (CCS + chademo + AC)
Tohano ny milina iray miaraka amina basy telo (CCS + CCs + GB / T)
Tohano ny milina iray miaraka amina basy telo (CCS + chademo + GB / T)
Raha ampitahaina amin'ny tabilaon'ny adaptatera ankapobeny eny an-tsena, ny vidin'ny fanaraha-maso dia azo avotana manodidina ny 50%
Vondrona famandrihana V2G misy andiany roa UBC
Tamin'ny resadresaka nifanaovana dia nilaza Andriamatoa Bai fa ny fitomboana haingana amin'ny isan'ny famoahana entana dia nitondra olana hafa ihany koa izay tsy azo tsinontsinoavina. Amin'ny taona 2030, hahatratra 80 tapitrisa ny isan'ireo fiara mpitondra angovo vaovao any Sina. Amin'izay fotoana izay, ny fahazoana miditra amin'ny korontam-bato maro be dia be dia be ny fiovan'ny enta-mavesatra, izay hisy fiatraikany lehibe amin'ny tariby herinaratra. Raha tsy misy ny fepetra raisina, dia mety hisy olana goavana toy ny fatran'ny herinaratra ary tsy misy famatsiana herinaratra intsony amin'ny taona 2020.
Ny famandrihana am-pilaminana dia nanjary fomba iray lehibe hanamaivanana na hanafoanana izany aza. Izy io dia afaka mitarika sy mandrindra ny fitondran-tena mamaly, manampy ny tadin'ny herinaratra hanapaka ny enta-tampony ary hameno ny lohasaha, hanatsara ny fahombiazan'ny fampiasana ny tambajotram-pizarana sy ny fahaizan'ny tariby herinaratra, ary hahatratra ny toe-javatra mandresy eo amin'ireo mpampiasa. ary ny kofehy. Ny fantsom-batana miasa miaraka amin'ny asan'ny V2G dia ho fitaovana maranitra hahatsapa famandrihana sy famoahana ny tadin'ny herinaratra.
V2G mpanangom-bokatra roa hetra UBC 75010 misy akorandriaka mamirapiratra fotsy ary famolavolan-tsoavaly hita tao amin'ny tranoben'ny UUGreenPower. Ny vokatra dia mandray ny famolavolana fiarovana avo lenta IP65 ary ny fitokanana matetika matetika, miaraka amina elanelam-pahefana tsy miovaova ary ny famolavolana tabataba ambany. Ny voltam-pifandraisana mifandraika dia afaka mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly, fenitra eropeana ary fenitra amerikana. Ny herinaratra nomena dia 7KW, izay afaka mifanaraka amin'ny tontolon'ny fametrahana 7GW AC. Azo soloina mivantana ary manana fidirana injeniera tena tsara.
"Eritrereto ity sehatra ity. Rehefa apetrakao ao amin'ny toeram-piantsonananao ny fiara misy anao miaraka amina antontam-bato UBC napetraka ao amin'ny orinasa mandritra ny andro, ary raisinao ny fiara aorian'ny fiasana amin'ny alina, dia hampiditra yuan am-polony amin'ny kaontinao ianao. Tena fahatsapana mahazo aina ve izany? " Hoy Andriamatoa Bai